"HAPANA" kune vakawanda kupfura vatyairi, "HAPANA" kumakambani anodheerera
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » nhandare yendege » "HAPANA" kune vakawanda kupfura vatyairi, "HAPANA" kumakambani anodheerera
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Colombia Breaking News • Kutarisirwa • kutakura • Kufamba Wire Nhau
Star Alliance Nhengo Avianca, iri muColombia inoita kunge iine matambudziko akakomba nevatyairi vavo uye kodzero dzevashandi. European Pilots 'Association (ECA) - inomiririra vatyairi vanopfuura 38.000 vanobva munyika makumi matatu nenomwe dzeEuropean - vanoshora zvakasimba kupfurwa kwevanhu vazhinji nevatyairi uye kuvhurwa kwekurangwa kwevatyairi veColombian Civil Airmen's Association ("ACDAC") neColombian air operator AVIANCA . ECA inodaidzira AVIANCA kuti ibvise chirango nekudzosa vatyairi vakadzingwa uye inodaidzira hurumende yeColombia kuti ione kuzadzikiswa kweMitemo yeInternational Labor Organisation (ILO) pamwe nemitemo yeOECD Corporate Governance.
Chinangwa chekambani nezvirango zvaro zvemuenzaniso uye zvisingaenzaniswi ndezvokutyisidzira nharaunda yekutyaira uye nekudaro kudzivirira chero kuyedza kwekuedza kuchengetedza kodzero dzevashandi. Kutongwa nekudzingwa kunotyora zvakakomba kodzero dzakakosha dzevatyairi veColombia kudzivirira zvido zvavo uye kuwana mamiriro ekushanda akanaka uye anogutsa.
Zvirambidzo muColombia pane kodzero yevatyairi vezvikepe yekuramwa zvinopesana nezvisungo zvepasi rose zveHurumende yeColombia senyika yakanyorerana Chibvumirano 87 cheInternational Labour Organisation (ILO) inosanganisira kodzero yevashandi yekuita nhaurirano pamwe nekuratidzira. . Komiti yeILO yeRusununguko rweMubatanidzwa yakaramba kuti vafambisi vengarava vanogona kubviswa pachiyero cheChisungo ichi. Kuvhurwa kwematare edzimhosva uye kudzingwa kwevatyairi kunoita chisungo chisiri pamutemo uye chisina kuenzana kodzero dzendege.
Maonero aAVIANCA pamusoro pevatyairi ve ndege anofuratira misimboti yeCorporate Governance yeChechi yeCommunity Cooperation and Development (OECD), sangano rakanyorerwa Colombia nenhengo. Sekureva kwesangano iri, makambani anofanirwa kucherechedza zvido zvevashandi vavo kuti vave nechokwadi chekubudirira kwemakambani avo. Kana Colombia nemakambani ayo vachida kujoina OECD, vanofanirwa kuratidza kuti vanoshandisa zviga zvekutonga kwakanaka vachiremekedza kodzero dzakakosha dzevatyairi veACDA.
Nezvikonzero izvi, ECA inoendesa kune vayo voshanda navo muColombia rutsigiro rwayo nekubatana uye inokurudzira hurumende yeColombia neAvianca kugadzirisa kudzikisirwa kwekodzero dzevatyairi vayo, kumisa maitiro ekuranga, kugashira vatyairi vakadzingwa uye kutanga nekukurumidza sezvinobvira mutsva misangano yekuwana chibvumirano chebasa chakadzikama.